कृषि अनुदान किसानलाई कि कागजलाई - Sarokar Khabar
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
कृषि अनुदान किसानलाई कि कागजलाई
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७0
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यो सवैले सुनेकै र वोलेकै शव्द हो । नेपालमा कृषिमा क्रान्ति गर्नु पर्दछ, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्दछ भन्दै राज्यका नीतिहरु पनि बनि रहेका छन् । तर सरकारको वेवास्था र समयमा नै चासो नहुँदा किसानलाई सधै पीडा र त्रास थपिएको छ । किसानलाई उत्पादन गर्न पनि समस्या छ र बजारमा विक्रि गर्न पनि समस्या रहेको छ । अझ निर्वाहमुखी खेती गरेका किसानहरुको समस्या झन कहालि लाग्दो छ ।
समय एउटै साल फरक तर किसानका पीडा र त्रास भने हरेक बर्ष एउटै हुने गरेका छन् । देशको अवस्था र व्यवस्था पुरै फेरिएको छ । तर किसानका समस्या २० बाट १९ मा भने झरेको अवस्था पक्कै छैन् । किसानलाई विऊ विजन, मल, जनशक्ति देखि बजारका समस्या बर्षौ देखी यथावत नै रहेका छन् । परम्परागत खेती हटाएर कृषिलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाई मुलकमा कृषिमा क्रान्ति गर्नेछौ भनेर कुर्लनेहरुको हविगत को कुरा गर्नु वेकार छ ।
तर किसानका सवालमा राज्यले राम्रा राम्रा नीति लिएको छ । तर यस्ता कार्यक्र किसानलाई थाहा नै हुदैन् । किसानका लागि आएको कार्यक्रम कागजका आधारमा दिईन्छ । अहिले कृषि क्षेत्रलाई मनपराएर व्यवसाय गर्ने भन्दै प्रक्रिया पुरा गरेर अनुदान थाप्नेको होडबाजि रहेको छ । बास्ताविक किसानले आवश्यक कागज मिलाउन नसक्दा उनीहरुले अनुदानमा सहजता पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई कृषि कर्म गर्न नै फुर्सद छैन उनीहरुले कागज कसरि मिलाउने समस्या रहेको छ । किसान सधै समस्यामा परेका छन् । उनीहरुलाई खेतीमा चाहिले मल, जल र जनको समस्या उस्तै छ । घरमा जन हुनेले मात्र खेतीपाति गर्ने गर्दा मुलुकमा खाद्यान्न आयात बढिरहेको छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई सुधार र प्राथमिकतामा नराख्दा लाखौ युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु परेको छ । विदेशमा दुःख पाएर आएका युवाले स्वदेशमा नै कृषि व्यवसाय गरेका युवाको पहुँच नपुग्दा उनीहरुपनि थलिएर बस्नु परेको अवस्था रहेको छ । बल्ल तल्ल दुःख कष्ट गरि कृषि बस्तु उत्पादन गरेपनि विक्रि वितरण हुदैन । बजारमा विचौलियाको विगविगि छ । नियमन निकाय कमिसनमा रमाउछन् । किसानले उत्पादन गरेका बस्तु स्थानीय बजारमा नै विक्रि हुदैन् । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रमा भएका कृषि व्यवसाय बारे नै अनविज्ञ रहेका छन् ।
किसानलाई कहिले फौजी आउछ सताउछ, कहिले सलह आउछ अत्याउछ । बादर, दुम्सि, बदेल र जंगलि जनावरले दुःख दिएपछि हरेक बर्ष खेतियोग्य जमिन जंगलमा परिणत भएका छन् । राज्य नै वेखवर छ । हिजो देखी आज सम्म हेर्दा न किसानले भने जस्तो र न सरकारले भनेजस्तो कृषि क्षेत्र रहेको छ । केही समस्या हल भए होलान् । गैर किसान मालामाल भए । तर किसानको हात पुर्पुरोमा सधै छ । तै पनि हाम्रो कृषिमा क्रान्ति गर्ने अभियान जारी छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर, मल, जल, जन, विऊ, प्रविधि, प्राविधिक दिएर बजारको ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपालमा कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने अवस्था छैन् ।
पार्टीको अन्तरविरोध समाप्त पार्ने भन्दा उल्टै झंग्याउने : प्रदीप कटुवाल
२३ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:५७0
चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आएको छु
सामान्य जीवनशैलि अप्नाउदै आएका वडाअध्यक्ष हुन् टिकाबहादुर मोक्तान । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेता मोक्तान २०५१ सालमा नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता लिनुभयो । त्यस अघि पनि कम्युनिष्ट विचार सिद्ध
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०१:३४0
लित बि.सि. र महेश कुमार भण्डारी सलह फट्याङ्ग्रा प्रजातिको हानिकारक किरा हो । अफ्रिकाबाट सन् २००३ देखि २००५ सम्म यसको प्रकोप विशाल रुपमा फैलिएको मानिएको छ । अन्ट्राटिका र उत्तर अमेरिका बाहेकका सबै जसो
२०३६ सालमा विद्यार्थी संगठनबाट राजनिति सुभारम्भ गर्नु भएका केशव देवकोटा तत्कालिन नेकपा एमालेका एक प्रभावशालि नेता हुन् । अखिल पाचौंको जिल्ला कमिटि सदस्य, पार्टी प्रजातान्त्रीक मञ्चको जिल्ला सदस्य, २०४
साविक सिद्धेश्व गाउँविकास समितिको वडा नम्बर सातमा सामान्य कृषक परिवारमा जन्मिएका विनोद कुमार खड्का अहिले जिल्लाबासीको लागी मात्र नभएर देशले नै चिन्ने व्यक्ति हुन । २०४८ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको सा
शुसिल प्याकुरेल आजकल विभिन्न व्यक्ति र संचार माध्यममा पटकपटक नेपालको नागरिक समाज सुस्ताएको, विभाजित भएको वा दलहरूको प्रभावमा परेको र त्यसैले मौन रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह भैराखेको छ । संयुक्त जनआन
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७
वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:०७